မြောင်းမြမြို့ NLD ပိုစတာများ ဖျက်ဆီးခံရ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြောင်းမြမြို့နယ် ၊ ရှမ်းရေကျော်ကျေးရွာ NLD ရုံးက ပိုစတာတွေ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ညက ဖျက်ဆီးခံရပါတယ်။ NLD ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မန်းဂျော်နီ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ ပါတဲ့ ပိုစတာတွေပါ။
သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ရဲစခန်းကို တိုင်ကြားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ဒါ ပြည်သူတွေကို ကြောက်လန့်အောင်လုပ်တာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီက ပြည်သူတွေကိုတော့ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ဆက်လက် အောင်ပွဲဝင်နိုင်အောင် ဆက်ပြီး ကြိုးစားပေးကြပါ၊ ဘာတုန့်ပြန်မှုမှ မလုပ်ပါနဲ့။ … ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်သွားမယ်၊ လောလော ဆယ် တိုင်ချက်ဖွင့်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်။ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခဏခဏ ပြောနေတဲ့ တရားဥဒေ စိုးမိုးမှု မရှိသေးဘူး ဆိုတာ ပြတာပဲ။ ဒါကြောင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရှိတယ် ဆိုတာ ပြချင်ယင် ဒီကိစ္စကို ဖော်ထုတ် အရေးယူပေးဖို့ လိုပါတယ်” လို့ မန်ဂျော်နီက ပြောပါတယ်။
မူရင်း – NLD
3 Responses to မြောင်းမြမြို့ NLD ပိုစတာများ ဖျက်ဆီးခံရ
Rape * on March 20, 2012 at 10:36 pm
When media asked exGeneral Tin Aye( Head of Election committee-Judge position) for previous election , he said to forget past , coming election will be fair .
What I understand to his word is like the raper said to forget rape case to raped victim . Very wise , fair and learning remark—————————–from world crime criminal !
Now ,Well, Well ! like that we all accusers are false because we complaint to father about his dirty son. Any effective!
Kyunt Phunt is marching “Fair to f—k election” again.
What should people have to do! Crying just reaches to deaf ear.
If there is no foreign sanction , could it become murder case (not rape case)..!
So, Junta himself proves that ” lifting sanction means giving the killing license” ..
May God bless Burma..
U ThiHaTintSwe on March 21, 2012 at 10:42 am
More doing as behavior,more decreasing of faiths of All Burma’s national peoples & global Burma’s democratic forces on 1/4 Myanmar Junta Regime’s democratic reforms!
U ThiHaTintSwe on March 21, 2012 at 10:47 am
These behaviors can greatly disturb U Thein Sein’s 1/4 Myanmar Junta Regime.